Naya Post Nepal | अब यसरी छुट्न सक्छन् पल ? पि’डित ना”बालिक हुन् भन्नेमै वकिलको आ’शंका ? उच्च जाने अ’न्तिम तयारी ( हेर्नुहोस भिडियो सहित )
अब यसरी छुट्न सक्छन् पल ? पि’डित ना”बालिक हुन् भन्नेमै वकिलको आ’शंका ? उच्च जाने अ’न्तिम तयारी ( हेर्नुहोस भिडियो सहित )
अभिनेता पल शाह पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । जिल्ला अ’दालत तनहुँको आदेशपछि शाह बिहीबार जेल चलान भएका हुन् । अर्का प्रतिवादी कृष्णराज जोशीलाई भने अदालत ले एक लाख ध’रौटी छाड्ने आदेश गरेको छ ।
जोशी पलका म्यानेजर हुन् । उनलाई घ’टना”को मतियार मा निएको छ । उनी बिही’बारै हिरासतमुक्त भएका छन् । तर उक्त आदेशमा पल शाह पक्ष सन्तुष्ट छैन । तनहुँ जिल्ला अदालतले दिएको थुनछेक आदेशवि’रुद्ध अभिनेता पल शाह पुन’रावेदनमा जाने भएका छन् ।
जिल्ला अदालतले हिजो पललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठा उने र अर्का प्रतिवादी कृष्ण जोशीलाई १ लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो अधि’वक्ता वाग्लेका अनुसार कृष्ण जोशी को हकमा अदालतको आदेश स्वीकार्दै पुर्पक्ष प्रक्रिया अ’गाडि बढ्ने छ भने पलको मुद्दामा पु’नरावेदन गरिनेछ ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम निवेदन लिए र पुनरावेदनमा जाने तयारी गर्दैछौं,’ उनले भने । अदालतले प्रति वादीलाई थुनामा राख्न चाहिने तथ्य प्र’माण मुद्दाको मिसिलमा न रहेको वाग्लेले दावी गरे । अदालतको आ’देशप्र”ति उनको अस हमतिका विषयहरू यस्ता छन्-
‘अदालतले पल शाहलाई थुनामा राख्ने भनेर दिएको आदेशमा हामी स’न्तुष्ट छैनौं । पहिलो कुरा, पीडित भनिएकी प्रहरीले दिए को नामले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय वा अस्पतालमा दिएको व्य’होरा र प्रहरीमा गरेको व्यहोरा नै फरक छ । अस्पतालमा उन ले स्ख’ल’न पर्दामा गराएको भनेकी थिइन् ।
तर, प्रहरीमा बयान दिँदा यौ’नीमा नै गराएको बताएकी छन् । य समा विरोधाभास छ । वैशाख १४, २०७८ को बेलुका ११:५० मा घटना भएको भनिएको छ । तर, त्यसको भो’लिपल्ट बिहानै ‘व्यास १२’ कोरिबाटी चि’टिक्क परेर लुगा लगाएर पल शाहसँगै ढोलबाराही मन्दिरमा दर्शन गर्न गएको देखिन्छ । यो पनि स्वा’ भाविक छैन ।
राति कर’णी भएको हो भने भोलिपल्ट बिहान हा’रगु’हार गरेर प्रहरीमा जानुपर्ने । तर, दिनभरि उनी सुटिङमा सहभागी भएकी छन् । काठमाडौं पनि सँगै गएको र त’त्कालै कतै उ’जुरी नगरिए को अवस्था छ । अहिले ९ महिनापछि आएर उजुरी गर्नु अ’विश्व सनीय हो ।
केही दिनभित्रै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिने पल शाहका कानुन व्यवसायी व’रिष्ठ अधिव’क्ता कमलामोहन वाग्लेले बता ए। पल शाहलाई धरौटीमा रि’हा गरेर मु’द्दाको पुर्प’क्ष गर्नुपर्ने मा ग उनीहरुले उच्च अदालतमा गर्ने भएका छन्। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
२०७८ चैत्र १३, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 1160 Views